Maitiro ekubatanidza kune Windows PC ine kure desktop kubva kuMac | Ndinobva mac
Maitiro ekure kure desktop kubatanidza kune Windows komputa kubva kuMac
Kana iwe uine komputa ine Windows inoshanda sisitimu uye iri kure desktop desktop iri kushanda, zvinogona kuti iwe wakambozvibvunza kana paine mukana wekuwana iyo komputa kubva kuMac, nekuti pane dzimwe nguva zvinogona kubatsira kuti usashande paPC neyechitatu bato software, uye kugona kugadzira kubatana zvakananga kubva kuMac, sezvazvinogona kuitwa kubva kune imwe Windows komputa.
Zvakanaka, mune ino kesi, kunyangwe zvisiri nyore sezvo macOS isina chishandiso chinouya chisati chaiswa uye icho chinokutendera iwe kuti uite izvi kunyanya, chokwadi ndechekuti zvinoita unogona kugadzira kure desktop desktop kubva kune chero Mac, uye nekuda kweizvi iwe unongofanirwa kuisa application.
Unganidza kune ako Windows makomputa kubva kuMac neMicrosoft Remote Desktop
Sezvatataura, ino nguva kubva kuMicrosoft havana kuzviita zvakaoma kune avo vashandisi vanoshuvira kushandisa desktop iri kure kubva kuMac, nekuti ivo vakagadzira application yacho, iri zvakare nyore kushandisa uye yemahara, kunyangwe mune ino kesi iine diki diki, uye ndizvo inongowanikwa muChirungu.
Chero nzira, kubatanidza kune yako Windows komputa kubva kuMac, chinhu chekutanga chauchazoda chinotevera:
A Windows PC (kunyanya Windows 10 kushanda zvirinani), yakagadzirirwa kubvumira kure kure kubatana kubva kumamwe makomputa.
Iyo IP yemidziyo yakati kuti ikwanise kubatana.
Mushandisi uye password inoenderana yaunoda kuwana zvakanyanya.
Iyo Microsoft Remote Desktop application pane yako Mac.
Microsoft Remote Desktopvakasununguka
Paunenge uchinge waunganidza izvi uye ukanyora nenzira kwayo, iwe uchave wakagadzirira kubatanidza kekutanga kune yako komputa iri kure, iyo iwe yaunofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Vhura Remote Desktop application kubva kuMac yako wobva wadzvanya pane wedzera icon, uye sarudza "Desktop" (kana "Desk" muchiSpanish). Muchiitiko chekuti iyo wizard yakangoerekana yaonekwa, haufanire kuita izvi, ingoenderera uchimisikidza.
Mumunda wakadaidzwa "PC Zita", nyora kero Windows komputa IP mumubvunzo iwe unoda kubatana ne, kana iyo host name muchiitiko chekuti iwe uine ese makomputa pane imwecheteyo netiweki yekubatanidza.
Kana izvi zvaitwa, mumunda we "User Account", une zvingasarudzwa zviviri, zvinoenderana nezvaunoda iwe pachako:
Siya iri se "Ndibvunze nguva dzese", kuitira kuti pese paunoda kuwana komputa zvakare, uchafanirwa kuisa manyorerwo esita yezita rako nekuwedzera kune password, iyo inogona kubatsira kana uine vashandisi vazhinji vakagadzirwa paWindows PC, uye iwe uchida kubatana nguva dzese mumwe wavo akasiyana.
Gadzira account yemushandisi, iyo yaunogona kusevha imwe kana vamwe vashandisi kuti vawane makomputa ako nenzira inokurumidza, nekuti haufanire kuisa zita rekushandisa kana password. Kana iwe uchifarira izvi, iwe unofanirwa kusarudza iyo sarudzo "Wedzera Mushandisi Akaundi ...", uye woisa zita rekushandisa, password uye zita rakajairika rekushandisa kana uchida.
Mushure meizvi, iwe unofanira kungoita tinya bhatani re "Sevha" ,
Iwe unongofanirwa kubaya pane iyo iwe yawakagadzirisa, uye mune nyaya yemasekondi zvese zvichagadziriswa uye unogona kuiwana pasina dambudziko, uye kana zvese zvikafamba mushe, shandisa sekuti yaive Windows komputa pachayo, chete mukati mehwindo.
Paunenge iwe waita izvi, zvinoenderana neshanduro yeWindows yawakaisa pane komputa yawakabatana nayo, iwe unogona kugadzirisa akateedzana emaparameter kubva mukugadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekure kure desktop kubatanidza kune Windows komputa kubva kuMac
Francisco Jose akadaro
Izvi zvinoshanda zvakanaka, asi ini handimbo tora iwo anodhinda kuti ashande nemazvo.
Pindura kuna Francisco José
Izvo zvinoda kuziva. Kubva pane zvandakaona, tambo mune yangu hapana dambudziko, asi kana uchidhinda uchishandisa iyo Wi-Fi paPC kushamwaridzana neprinta, zvinoita sekunge kune matambudziko ... Zvisinei, ndinofungidzira kuti ine chekuita nacho kuti iyo chiratidzo che desktop iri kure inotumirwa kuburikidza nenzvimbo imwechete, asi hei, ndinoti mune ramangwana shanduro kana Windows mhinduro ichauya 😉
Inoshanda zvakakwana asi ini handigone kuprinta ndichishandisa purinda netambo kana wifi, ???
Ini handiwani rondedzero yenzvimbo dzebasa, saka ini handisi kuwana mac yangu yekusarudza.
NDATENDA WAKAKWANA NEKUBATSIRA RAKO RUBATSIRO, NDINOTENDA KUNYORWA KWAKO NDAKAZVIITIRA MUMI Maminetsi gumi. NDATENDA
Manheru akanaka, ini ndinotevera nhanho, asi kana ndasvika kune zita rekushandisa uye password zvinondiudza kuti hazvina kunaka uye handikwanise kubatana nehofisi yangu pc.
Rafa Palacios akadaro
Manheru akanaka uye ndinokutendai zvikuru nechinyorwa ichi:
Ndine rimwe bhuku rekare mac, iro randisingakwanise kumisikidza El Capitan OS (10.11) yazvino uye saka Apple Store haizondibvumidza kuti ndiwane nekuisa Remote Desktop (v. 10.3) ndiri kuedza kutsvaga kurodha pasi vhezheni yapfuura yechirongwa ichi (Remote Desktop 8.0.44) asi ini handikwanise.
Kana iwe uchigona kundibatsira zvingave zvakanaka.
Pindura kuna Rafa Palacios
Mhoro! Ndine dambudziko rakafanana naRafa, ini ndoda vhezheni yechinyakare yedesktop iri kure.
Mhoroi, kwandiri hazvishande kwandiri nekuti kana kuyedza kubatanidza zvinondipa kodhi yekukanganisa 0x204. Izvo hazvitombo bvunza iro rekuenda komputa zita rekushandisa uye password.
Unoziva zvinogona kuitika here?
Pindura kuna mar
Dambudziko rakafanana naMar, unoziva kana paine mhinduro?
Zvakanaka chinhu chimwe chete chinoitika kwandiri mune yangu hazvishande kwandiri nekuti kana kuyedza kubatanidza zvinondipa kodhi yekukanganisa 0x204. Izvo hazvitombo bvunza iro rekuenda komputa zita rekushandisa uye password.
Masikati akanaka! Ndine dambudziko rinotevera, kana ndikashandisa Microsoft Remote Desktop kubva paMAC yangu nehukama hwangu hweWIFI, hazvishande.
Iye zvino, kana ndikaishandisa kuburikidza neinternet yakapihwa nharembozha yangu, inobatana isina musono kukombuta yangu yedesktop.
Unoziva here kuti dambudziko ringave rei?
Maitiro ekusarudza zvese zvinhu mufaira paMac ine yakapusa kiyi musanganiswa